chigadzirwa - Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
MCCB (Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Remagetsi)
Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Remedhi inoitirwa kuitisa zvazvino muyakajairwa modhi uye kuidzima pamaseketi mapfupi, kuwandisa, isingagamuchirike bucking pamwe nekushanda kwekuita uye kugumburwa kwemagetsi wedunhu zvikamu. Izvo zvakagadzirirwa kuti zvishandiswe mumagetsi mayuniti ane iyo yekushandisa magetsi inogumira ku400V payakavhenekwa parizvino kubva pa12,5 kusvika 1600A.
Iwo anoenderana nezvinodiwa zveEN 60947-1, EN 60947-2
ELCB / CBR (Pasi Leakage Circuit Remake)
Earth Leakage Circuit Breaker akateedzana edunhu mabhureki anoshandiswa zvakanyanya mukuvaka, zvifambiso, mugero, pekugara, nezvimwewo Iyo yekunonoka mhando mune ino nhevedzano yedunhu breakers inoshandiswa kune mitsara yebazi
Kugoverwa kwemigwagwa; Rudzi runogadziriswa runoshandiswa kugadzirisa zvakasara chiito chazvino kana nguva yekubvisa pane saiti.
MCB (Mini Dunhu Remagetsi)
Miniature wedunhu mabhureki anoitirwa kupa otomatiki magetsi sosi-akacheka pasi peakawandisa mafashama Iwo anokurudzirwa kuti ashandiswe mumapoka emapaneru (furati nepasi) nemabhodhi ekuparadzira edzimba dzekugara, dzekumba, dzeveruzhinji nedzemahofisi.
RCBO (Residual Yazvino Yakagadziriswa Dunhu Rinotyora neKuchengetedzwa Kwakawanda)
Residual yazvino inofambiswa wedunhu mabhureki ane overcurrent dziviriro inoitirwa magetsi ekuvhundutsa njodzi kuitira kana magetsi ekuisa kuputira kutadza, kwekudzivirira moto unokonzereswa nepasi pari zvinovhunika, kuwandisa uye pfupi dunhu redziviriro.
RCCB (Inosara Yazvino Circuit Breaker)
Iyo RCCB inosara yazvino redunhu breaker yakagadzirirwa uye inogadzirwa zvinoenderana neazvino IEC61008-1 zviyero uye inoenderana neEn50022 zviyero zve modular switch. Inogona kushandiswa kurodha yakajairwa gwara njanji ne "ngowani chimiro" zviyero zvakaenzana.
Mota yekudzivirira wedunhu mudariki
Thermal shrink busbar yakabatana bhokisi